OBN Afaan Oromoo Oduu armaan gadii kana marsaa Tigray Online jedhamu (miidiyaa warra TPLF) irraa fudhate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOBN Afaan Oromoo Oduu armaan gadii kana marsaa Tigray Online jedhamu (miidiyaa warra TPLF) irraa fudhate.
OBN Afaan Oromoo Oduu armaan gadii kana marsaa Tigray Online jedhamu (miidiyaa warra TPLF) irraa fudhate. Akkuma oduu kana irratti agarru mootummaan Itoophiyaa liqii irratti ammas liqii dabalachaa jira. Armaan dura Itoophiyaan China irraa yoo xiqqaate Dolaara biiliyoona 40 ol (more than $40,000,000,000) liqeeffattee daynii/idaa ulfaataa keessa jirti. Sana irratti kunoo liqiin $250,000,000 dabala. Kan daranuu nama raaju ammoo liqiin amma dabalataan liqeeffatame guutummaatti misooma magaalaa Maqaleef tahuu isaa ti. Wayta Dr. Abiyyi aangootti dhufu keessas dhimma bishaan magaalaa Maqaleef jedhamee birriin biiliyoonni 8 (ETB 8,000,000,000) liqeeffatamuun kan yaadatamu.
Bulchiinsi Dr. Abiyyi idaa biyyattiin keessatti kuftee jirtu ni beeka. Horiin hanga ammaatti ala irraa liqeeffatame eessa akka seene beekamuu qaba. Gurmuun ogeeyyii walaba irraa jaarame tokko bakka horiin kun seene qorachuun dafee ummata biyyattiif ifa godhuu barbaachisa. Horiin kun dantaa warra TPLFiif akka oole wal nama hin gaafachiisu. Jarri kun ammas liqiidhaan biyattii dugda kutaa jiru. Dr. Abiyyi balaa idaadhaan qabamuu kan Tigiroonni biyyattii irratti aggaamaa jiran dhaabsisuu fi ofii isaas yakka kana keessaa walaba tahuu isaa tarkaanfii fudhatuun beeksisuu qaba
Chaayinaan liqaa Doolaara Ameerikaa miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 50 Itiyoophiyaaf laatte.
[OBN 03 09 2010] Chaayinaan Ityoophiyaaf liqaa Doolaara Ameerikaa miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 50 laatte. Waliigaltee liqichaa ministir deettaan Ministeera Maallaqaa fi Walta’umsa Diinagdee obbo Admaasuu Nabbabaa fi ambaasaaddarri Chaayinaa Taan Jiyaan walii mallatteessaniiru. Maallaqichis hojii proojaktii magaalaa Maqaleef akka oolu himameera.Liqaan laatame dhala xiqqaadhan kan kaffalame. Waliigalteen deeggarsa namoomaa Itiyoophiyaa fi Chaayinaa Yuwaanii miiliyoona 100 mallatteeffameera.Maddi:- TOI
#China provides $250mln loan for #Ethiopia https://t.co/wOpAF9MCYD “The loan would be used to implement the project designed to solve the potable water shortage of #Mekele, the regional capital of #Tigray Regional State.” It is “termed low and interest free” pic.twitter.com/GWlFezshj7
ESAT Daily News Amsterdam May 10,2018-ESAT Eletawi Thu 10 May 2018 https://t.co/O9VRc5pJIl pic.twitter.com/NP9APCgNwn